Indlu yeeNdwendwe ye-B&B yasemaphandleni enomtsalane, igumbi elingunombolo.2
Igumbi lakho lokulala e indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguAnnette
UAnnette ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-90% yeendwendwe zakutshanje.
ICamino Los Romereros yindlu yelizwe enomtsalane emi kumda wembali yedolophu yaseSpain yeCathedral yaseGuadix, kwingingqi yaseGranada eAndalucia.
Sinemibono etshayelayo kuyo yonke idolophu kunye neendawo ezisingqongileyo ukusuka kwindawo yokuphumla, kukho amagumbi ama-3 een-suite ala maxesha eendwendwe akhoyo kwindlu enkulu angabhukishwa eyedwa okanye njengeqela. (umntu oqhagamshelwana naye xa ubhukisha iqela) Onke amagumbi okulala anezitshixo ezinezitshixo zomnyango omkhulu kunye nesango lokumisa izithuthi zabucala.
Indawo yokuphumla ipholile kwaye ikhululekile kunye nomlilo welog ngeengokuhlwa ezipholileyo, isikrini esikhulu kunye neprojekti sinoluhlu olukhulu lweefilimu kunye neenkqubo zokubukela sine-wifi yasimahla. Ukutya kwasekuseni kunikwa izinyuko zenqwelomoya kwindlu enkulu apho sinikezela ngesidlo sakusasa esiphekiweyo okanye selizwekazi ngokuthanda kwakho oku kubandakanyiwe kwixabiso, sinikezela ngesidlo sasemini semihla ngemihla kunye nemenyu yokutya yangokuhlwa (iindleko ezongezelelweyo) ukuba awuziva. ngathi ndiyokutya phandle . Sinedama elikhulu elinamagumbi okuphumla elangeni kunye nezitulo zokuphumla (iitawuli ze-pool zinikezelwe) idama livulwa ngoMeyi ukuya kuSeptemba alitshisi ngoko ke iinyanga zikaMeyi noSeptemba ayizizo ezabantu batyhafileyo. Igadi enendawo yokuhlala egqunyiweyo kunye ne-hammock Siqhuba ibha yokunyaniseka.
IGuadix yidolophu entle enamaqashiso okubonelela, iivenkile zokutyela, iibhari zetapas kunye neendawo ezinomdla zokutyelela njengecathedral, imyuziyam yomqolomba. Kwakhona kuhle kakhulu ukuhamba, ukuhamba, ukukhwela ibhayisekile, iparagliding kunye nokutyibiliza kwiinyanga zasebusika. IGuadix yindawo entle kumntla weSierra Nevada enobude obungama-960 m ngaphezu komphakamo wolwandle, ihlobo lishushu kakhulu kwaye ubusika bubanda kakhulu. Kodwa bayenza ibe yidolophu entle ngakumbi eyimizuzu engama-30 kuphela ukusuka kwikomkhulu laseGranada kunye neyure enye nemizuzu engama-30 ukusuka eSierra Nevada. Ulwandle lweAlmeria kunye neGranada lungaphantsi kweyure enye ngemoto.
Eli likhaya lethu ke sisoloko siza kunceda ngayo nayiphi na into onokuthi uyifune singakunceda ngendawo yokutya, eyona tapas bar, iindawo zokundwendwela. Siyathanda ukuba iindwendwe zethu zizive zisekhaya apha unganxibelelana nathi kancinci okanye kangangoko unqwenela ukuba sibenegadi yeziqhamo encinci, igadi yemifuno kunye nenkuku eziziintlobo ngeentlobo ukusuka koku ndenza ukugcinwa, iichutneys, pickles kunye nejarred fruit oya kuthi fumana ukuzama isidlo sakusasa.Ndiyazithengisa ezi mveliso.
Eli likhaya lethu ke sisoloko siza kunceda ngayo nayiphi na into onokuthi uyifune singakunceda ngendawo yokutya, eyona tapas bar, iindawo zokundwendwela. Siyathanda ukuba iindwendw…
Inombolo yomthetho: CTC-2020145450